सिकाइ प्रकृया – HostKhabar ::
by मनवीर नेपाली
सिकाई प्रकृया जिवनभर चलिरहने प्रकृया हो । सिकाई शैलीले जिवनलाई सफलतातिर लैजान्छ । सिकाई हरेक क्षेत्र, अवस्था र परिवेशमा निरन्तर चलिरहन्छ । मानिसले औपचारिक र अनौपचारिक दुवै किसिमले जिवनमा धेरै कुरा सिकिरहेको हुन्छ । शिक्षण, अध्यापन, शिप, जिवनका हरेक कृयाकलाप वा पेशा व्यवसायमा सिकाई चलिरहेको हुन्छ । सिक्नका लागि विभिन्न विधीहरु अपनाइएको हुन्छ । यस्ता विधीहरुलाई सिकाई शैली पनि भनिन्छ ।
क. सिकाइ प्रकृया के हो ?
सिकाइ जीवनको एक निरन्तर प्रकृया हो । अर्थात, क्रोको देखि चिता सम्म जानु पूर्ब मानिसले सिकेर भ्याएको हुंदैन । तर कसरी सिक्ने ? यसको पनि तरिका हुन्छ । ठीक तरिकाले सिक्नु भयो भने त्यो सिकाइ पनि ठीक हुन्छ । बेठीक तरिकाले सिकिरहनु भएको छ भने त्यसले तपाईंलाई जीवन भरि नै दुःख दिन्छ । त्यसैले यहाँ केही प्रकृयाहरु हेरौं :
सबै भन्दा पहिले कुनैपनि ब्यक्ति नयाँ कुरा/तथ्य सिक्नकोलागि उत्तप्रेरित भयो भने उस्ले त्यसका बारेमा खोजिनीती गर्दछ । त्यसकाबारेमा सोच्न थाल्छ । उत्प्रेरित हुनकालागि उस्ले उक्त कुराबाट कति फाईदा हुन्छ वा उस्को जीवनमा त्यसले कति सकारात्मक फाईदा पुग्छ ? भनेर जानी नजानी बिष्लेषण गर्दछ । उसको जीवनमा फाईदा बढी हुन्छ, उस्को जीवन परिवर्तन हुन्छ र समाजमा उस्को हैसियत बढ्छ भने ऊ सिक्नकालागि तयार हुन्छ । यसैलाइृ उत्प्रेणा भनिन्छ । कुनै पनि कुरा सिक्नकालागि उत्प्रेणा निकै महत्वपुर्ण हुन्छ । अरुको कर कापमा सिकाइ प्राय शुन्य हुन्छ ।
२. धेरै प्रकारका प्रतिकृयाहरुः
सिक्नकालागि उत्प्रेणा जागिसके पछी उस्ले बिभिन्न प्रकारका माथि भनिए जस्तो प्रयासहरु गर्दछ । तर यो सिक्न लागेको काम कति उपयोगि छ ?, यसले मेरो जीवनमा कत्तीको सकारातमक वा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ?, म संग भएको पैसा वा श्रोतले पुग्छ कि पुग्दैन ? आदि बिभिन्न प्रकारका प्रतिक्रियाहरु आउन सक्छन । कहिले काहीं हौसलाहरु सकारात्मक वा नकारात्मक पनि हुन सक्छन । यो काम वा सिप सिकेर के फाईदा हुन्छ, म मा के परिवर्तन हुन्छ ?? तर सकारात्मक हौसला बढ्दै गयो भने उस्ले उक्त सिकाइलाई निरन्तर गर्दछ र ऊ लक्ष्यमा पुग्न सक्दछ ।
हरेक काम सिक्नकालागि मानिसलाई हौसला आवश्यक पर्दछ । हौसलाले उस्को गन्तब्य तय भएको हुन्छ । जव गन्तब्य तय हुन्छ तव उस्ले काममा रुचि जगाउँछ । पढाइ वा सिकाइ प्रकृया पनि यस्तै हो ।
३. समस्या वा रोकावटः
कुनै पनि काम सुरु गर्दा वा गरि रहदा समस्याहरु आउँछन । यो वास्तवमा प्राकृतिक नियम जस्तै पनि हो । तर समस्याहरुसंग डराउनु हुंदैन । समस्या भनेको त एउटा अवशर पनि हो । यसलाईृ अवसरको रुपमा लिन सक्नु पनि एउटा सिकारुकालागि महत्वपुर्ण कुरा हो । जस्तो पैसाको कमी हुन सक्छ वा समय कम हुन सक्छ । तर उस्मा दृढ ईच्छा छ भने उस्ले ति बाधा ब्यबाधानहरुलाई जसरी पनि समाधान गरेर अगाढी बढ्दछ र उस्लाई थप हौसलाहरु पनि मिल्दछ । समस्याहरुले सिकारुमा थप काम गर्न पनि सिकाउँछ ।
४. ठीक प्रकारको प्रतिकृयाः
धेरै प्रकारका प्रतिकृयाहरु आउँदा आउँदै र समस्याहरु आउँदा आउँदै सिकारुले ति सबै कुरा ब्यवस्थापन गर्दै जाँदा उसमा ठीक प्रकारको प्रतिकृयाहरु आउन थाल्छ । यस प्रकृयाले बिद्यार्थी वा सिकारुमा स्थायि रुपमा ब्यवहार परिबर्तन हुंदै आईरहेको हुन्छ । जसलाई सिकाइ भनिन्छ । जस्तोः एउटा यक्तिलाई कार चलाउन सिक्न उत्तप्रेणा जाग्न सक्छ वा आवश्यक्ता हुन सक्छ । यदि त्यसो हो भने उस्ले त्यसको बारेमा सोच्दछ र त्यसका बारेमा योजना बनाउँछ । कार कसरी चलाउन सिक्ने ?, यसका के के साधनहरु हुन्छन ? स्टेरिङ, क्लच, ब्रेक, लाईट, पार्किङ्क, चलाउने साईड, लाईसेन्स, समय आदिको बारेमा सोच्दछ । यति गर्दा गर्दै उस्ले निरन्तर प्रयास गर्दछ र अन्तमा कार चलाउन सिक्छ । उस्को एउटा लक्ष्य त पुरा भयो । तर उस्मा अरु निखार ल्याउनु पर्दछ । यसकालागि उस्ले थप अभ्यासहरु गर्दै जान आवश्यक हुन्छ र एक दिन ऊ परिपक्क कार चालक हुन सक्छ ।आवश्यक्ता नै आविष्कारको जननी हो भन्ने तथ्य यहाँनेर सावित हुन्छ ।
५. हौसला जागृतः
हरेक काम सिक्नकालागि मानिसलाई हौसला आवश्यक पर्दछ । हौसलाले उस्को गन्तब्य तय भएको हुन्छ । जव गन्तब्य तय हुन्छ तव उस्ले काममा रुचि जगाउँछ । पढाइ वा सिकाइ प्रकृया पनि यस्तै हो । मैले यो बिषय सिकें वा यो काम सिकें भने मेरोलागि धेरै सम्भावनाहरु आउँछन । त्यस पछी उस्ले सिकाइमा तत्परता दिन्छ र ऊ सफल पनि हुन्छ ।
६. सिकाइ ब्यवस्थापनः
हरेक बिद्यार्थीले सिकेको कुरामा निखारता ल्याउु पर्दछ । जति धेरै अभ्यास गर्यो त्यति नै धेरै सिकाइमा निखारता आउँछ । तथ्यमा तर्क बितर्क गर्न सक्छ । ठीक र बेठीक छुट्याउन सक्छ । जस्तो कक्षामा एक पटकमात्र भगवान श्रीरामको बारेमा पढाइ सकेपछी मुल्याङ्कनमा श्रीरामको पत्नी सिता होईनन् ठीक कि बेठीक भन्यो भने बिद्यार्थी अलमलमा पर्न सक्छन । किन भने उस्ले एक पटक वा दुई पटकमात्र पाठ पढेको अवस्था हुन्छ । यसको ब्यवस्थापनकालागि बिद्यार्थीले धेरै पटक उक्त पाठ पढेको हुनु पर्दछ वा यस्ता पाठ पढाउन अभिनय बिधि अपनाएर कसैलाई श्रीराम, कसैलाई सिता माता, कसैलाई लक्षमणको भूमिकामा अभिनय गराईएको रहेछ भने उनीहरुको मानसपटलमा छाप रहिरहन्छ । सिकाइ दिगो हुन्छ र बिद्यार्थीले सिकेको कुरा ब्यवस्थापन गर्न जान्दछ ।
७. लक्ष्य प्राप्तीः
धेरै जसो काम सुरु गरेपछी सबैको लक्ष्य राम्रै संग लक्ष्य प्राप्त गर्ने हुन्छ । खासगरी सिकाइको परिप्रेक्षमा । तर निरन्तर प्रायास र ठीक ढंगको शिक्षण सिकाइ प्रकृया अपनाएर पढाइएको छ भने केही हद् सम्म लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ । लक्ष्य प्राप्ती पछी बिद्यार्थीमा कार्य निखारता आउँछ ।
८. नयाँ लक्ष्य निर्धारणः
एउटा सिकाइको लक्ष्य पुरा भए पछी अर्को लक्ष्य निर्धारण हुन्छ । र पुनः माथिकै प्रकृया सुरु हुन्छ र सोही बमोजिम लक्ष्यहरु पुरा हुँदै जान्छन् ।
ख. सिकाइमा ब्यक्तिगत भिन्नताले पार्ने असरहरुः सिकाइ सजिलो प्रकृया होईन । बिद्यार्थीको ब्यक्तिगत भिन्नताले सिकाइमा फरक पार्दछ । सामुदायिक बिद्यालयहरुमा ब्यक्तिगत भिन्नतालाई बिचार गरेर पढाइएको पनि हुंदैन । ब्यक्तिगत भिन्नतामा के के पदृछन हेरौं :
१. उमेर र परिपक्कताः
जेरोम ब्रुनरले सिकाइको स्टेजमा भनेका छन कि जन्म देखि १८ (०–१८) महिना सम्मको उमेरलाई निसकृय स्टेज भनेका छन । यस उमेरमा बच्चाले केवल आफ्नो आमा र खाने कुरामा आमाको दुध चिन्न सक्छ । आवाज सुन्न सक्दछ । उस्ले कुनै कुरा नक्कल गर्न, दिईएको ईनस्ट्रक्शन पुरा गर्न सक्दैन । त्यस्तै उनले १८ महिना देखि ६ बर्ष सम्मको उमेरलाई देखेको कुरा वा पदार्थमा आकर्षित हुने तर बिचार बिमर्श गर्न नजान्ने वा नसक्ने प्रबृत्तीको ब्याख्या गरेका छन भने ६ बर्ष भन्दा माथिको उमेरलाई संकेतामात्मक उमेर भनेका छन। यस उमेरमा बच्चाले संकेतहरु नक्कल गर्न सक्ने, लेख्न सक्ने, बोल्न सक्ने र कुनै ईन्सट्रक्शन पालना गर्न सक्ने भनेका छन । यस मानेमा सिक्नका लागि उमेर अर्थात परिपकक्ता एक महत्वपूर्ण तत्व रहेछ । जीन पियाजेटले भनेका छन कि “सिकाइ हुनकालागि अनुभव महत्वपुर्ण हुन्छ ।” अर्थात उमेर महत्वपुर्ण हुन्छ । एउटै कक्षामा पढ्ने बिदार्थीहरमा अलि बढी उमेरको सहपाठी छ भने उस्ले अलि बढी चााडो बुझेको वा सिक्न सकेको हामीले महसुस गरेका पनि छौं ।
२. शारिरीक र मानसीक स्वास्थ्यः
“स्वास्थ्य छ त सबै कुरा छ ।” अर्थात “स्वास्थ्य नै धन हो।”हामी सबैले सुनेको र भोगेको कुरा हो । त्यसमा पनि मानसिक स्वास्थ्य अझ महत्वपुर्ण कुरा हो । शारिरीक र मानसीक स्वास्थ्य ठीक भयो भने मात्र उक्त ब्यक्ती÷बिद्यार्थीले नियमित कक्षा लिन सक्छ, नियमित रुपले अभ्यास गर्न सक्छ । दिईएका एसाईन्मेन्टहरु समयमा पुरा गर्न सक्छ । यसले उस्को निरन्तर सिकाइमा सहयोग पुग्दछ ।
प्रबृत्ती जसलाई अंग्रेजीमा ब्त्त्क्ष्त्ग्म्भ् भनिन्छ । यस शब्दको अंग्रजी बर्णमालाको क्रम अनुसार हरेक अक्षरको क्रम संख्या ( ब् भनेको १ हो भने जस्तै ) १+२० +२०+९+२०+२१+४+५=१०० हुन्छ । यसको अर्थ यो हो कि बिद्यार्थीको सिक्ने प्रबृत्ती पनि १०० प्रतिशत नै ठीक हुनु पर्दछ । अर्थात ढीक ढंगले सिक्ने, ठीक्क बोल्ने, गम्भीर भएर सोच्ने, साथीसंग ठीक ब्यवहार गर्ने, झूटो नबाल्ने प्रबृत्ती विकास गर्नु सिकाइकालागि उत्तम हुन्छ । अर्थात बिद्यालय सहि समयमा पुग्ने, सबै कक्षा नियमितरुपमा लिने, नबुझेको कुरा शिक्षकलाई सोध्ने, दिईएको गृहकार्य समयमा ठीक ढंगले सक्ने । रुटिन जे छ सोही अनुसार सिक्ने र अभ्यास गर्ने । साँचो बोल्ने, अनुशासित हुने, घरमा बाबु–आमालाई पनि आवश्यक सहयोग गर्ने, साथी–भाइहरुसंग पनि ठीक ढंगको ब्यवहार गर्ने जस्ता कुरा ठीक भएमा सिकाइमा सहयोग पुग्दछ । यस्ता बिद्यार्थी नै भविष्यमा राम्रो भएको बिभिन्न अध्यनहरुले देखाएका छन ।
४. सिक्नकालागि तत्परताः
हामीले माथि पनि चर्चा गर्यौं उत्प्रेणा । उत्प्रेणा जागेपछी बिद्यार्थीमा सिक्नकालागि तत्परता जागृत हुन्छ । सिक्नकालागि जहिले पनि तत्परता चाहिन्छ । तत्परताले कुनैपनि नयाँ चिज जान्न मद्दत गर्दछ र यसले अभ्यासमा जोड दिन्छ । अभ्यासले अनुभव प्राप्त हुन्छ । अनुभवले सिकाइलाई मज्बुद बनाउन मद्दत अवश्य गर्दछ ।
लक्ष्य स्पष्ट हुनु पर्दछ । के सिक्ने, कति सिक्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु पर्दछ । अर्थात कक्षामा कुन स्थान ओगट्नकालागि सिक्ने??, वा कुन ग्रेड(ए, ए+, बि…) हाँसिल गर्ने भन्ने लक्ष्य स्पष्ट हुनु पर्दछ । त्यस पछी कति नम्बरको गेयरमा दौडने भन्नेकुरा प्रष्ट हुन्छ । कक्षामा अधिकांश बिद्यार्थी औषत स्तरका हुन्छन । उनीहरुको लक्ष्य हुदैंन । अझ कतिको त बुवा–आमाले पढ्न जाउ भन्नु भयो ऊ पनि पढ्न आयो । नो प्रोबलम । तर लक्ष्य नै कमजोर भयो भने बिद्यार्थीको सिकाइ पनि अवश्य कमजोर हुन्छ ।
ग. घर र अभिभावकत्वः
घर भनेको कुनै पनि बिद्यार्थीको पहिलो पाठ्शाला हो । घरबाट नै उसले संस्कार सिक्न मद्दत पाउँछ । घरको संसकार राम्रो छ भने राम्रो कुरा सिक्छ अन्यथा घरको वातावरण राम्रो छैन भने समस्या हुन सक्छ । त्यस पछी वा संघसंगै अभिभावकत्वको कुरा आउँछ । अभिभावकत्व धेरै प्रकारका हुन्छन । ती मध्य सानोमा अलि निरङ्कुश र उमेर बढ्दै गएपछी अलि प्रजातान्त्रकि प्रकारको अभिभावकत्व अपनाउँदा राम्रो हुन्छ । गिजु भाइले “दिवा स्वप्न” मा लेखेका छन एउटा बालकको पडिा “म खेल्छु नखेल भन्छन, म गाउँछु नगाउ भन्छन, म उफ्रन्छु न उफ्र भन्छन म के गरु ??” राम्रो अभिभावक हुने निहुँमा निरङकुश अभिभावकमात्र भईरहँदा पनि बच्चाको सिकाइमा कहिले काहीं समस्याहरु आउने गर्दछ । पढ्नका लागि वा सिक्नकालागि सबै भन्दा पहिले ऊ यानेकी बच्चा तयार हुनु पर्दछ न कि अभिभावक ! अर्थात तापके तातिने कि बिंड ?? भने जसतै हो ।
घ. बिद्यालयको वातावरणः
बिद्यार्थीले ठीक ढंगले निरन्तर सिक्नकालागि बिद्यालयको वातावरण अत्यन्त महत्वपुर्ण हुन्छ । बिद्यालयमा पुस्तकालाय, बिज्ञान प्रयोगशाला, प्रसस्त शैक्षिक सामाग्री, दरबन्दी अनुसारको शिक्षकको ब्यवस्था, नियमित अतिरिक्त कक्षा संचालन, नीति–नियम र तिनको पालना, जुनियर रेडक्रस, स्काउट, ईको क्लवहरु, अलुमिनीहरु (पूर्ब बिद्यार्थीहरुको संगठन), चुस्त प्रकारको प्रशासनको ब्यवस्था भएको वातावरण हुनु पर्दछ । तर हाम्रा सामुदायिक बिद्यालयहरुमा यि सबै कुराको चरम अभाव छ ।
ङ. शिक्षण सिकाइ प्रकृयाः
सिकाइ प्रकृयामा सबै भन्दा महत्वपूर्ण मानिएको यस कार्यमा बिद्यार्थीको स्तर र क्षमता अनुसार शिक्षण सिकाइ प्रकृया अपनाएर शिक्षण गर्दा राम्रो हुन्छ । तालिम प्राप्त शिक्षकले शैक्षिक सामाग्री सहति बिद्यार्थी केन्द्रित बिधीले अध्यापन गराउनु पर्दछ ता कि बिद्यार्थीले धेरै भन्दा धेरै कार्य पावस् ।
कर्णाली सरकार र नेताहरु अस्पतालमा तिम्रो उपस्थिति तुरुन्त चाहियो !
राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिँदा
नेकपाको ‘ह्याङ ओभर’ मा रन्थनिएको कर्णाली र ख्याउटिएको बिकास